Ndị ọkà mmụta sayensị kacha mma na akụkọ ihe mere eme na ihe ha nwere | Netwọk Mgbasa Ozi
Ndị ọkà mmụta ihe banyere ala kacha mma n’akụkọ ihe mere eme
N’akụkọ ihe mere eme nke ụwa anyị a, e nweela ọtụtụ mgbanwe na mbara ala. Amụọla mgbanwe ndị a maka nnukwu onyinye sayensị nyere n’obodo anyị. A maara onye na-amụ banyere ọdịdị ala nke ala. N’akụkọ ihe mere eme nile nke mmadụ, e nweela ndị ọkà mmụta mbara ala bụ́ ndị nyeworo ọtụtụ ihe ọmụma bara uru banyere mgbanwe na ịrụ ọrụ nke ụwa anyị. Ya mere, ha na-atụle ndị ọkà mmụta ihe banyere ala kacha mma n’akụkọ ihe mere eme.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ndị ọkachamara banyere ala kacha mma n'akụkọ ihe mere eme bụ na ihe ha nyere na mpaghara sayensị.
1 Ndị ọkà mmụta ihe banyere ala kacha mma n’akụkọ ihe mere eme
1.1 Nicolas Steno
1.3 Nwunye Willian
1.5 Charles Lyell
1.6 Ọnye na -bụ Alfred Wegener?
O nweghi ike ihụ na otu ndị ọkà mmụta ihe ọmụmụ kacha mma n’akụkọ ihe mere eme. N’ezie ị nụtụrụla Nicolas Steno. Ọ bụ protagonist nke mgbanwe sayensị na narị afọ nke iri na asaa n'ihe gbasara ọdịdị ala. Nke a bụ onye ọkà mmụta banyere ala mbụ na akụkọ ntolite. Ọ mụrụ ọgwụ na njem na Europe niile bi na Tuscany. Ebe ndi otu sayensi nke izizi bilitere bu ndi Grand Duke Fernando II de Medici chebere ka ha mee nyocha ha.
Edemede ya bidoro ekelemkpofu azu ndị ọrụ ya nyere ya iwu ka o bipụta ya Canis carchariae. Ekele maka nkọwa nke ala terrestrial na fosil records ọ na-achịkọta ụkpụrụ nke layering ke ọwọrọetop n̄wed oro Prodomus. Nke bụ eziokwu bụ na ndị strata nwere ụkpụrụ nke mbụ horizontality na mpụta n'ihu. Nke ahụ bụ, mkpụrụ nke dị n’elu ya dị obere karịa nke dị n’okpuru ya. Dị ka mkpụrụ osisi, ha nwere oge na-aga n'ihu n'oge.
Nicolás Steno bụ onye gosipụtara na ụwa anyị nwere akụkọ ntolite nke enwere ike ịmata site n'ịgụ nkume. N'ihi nchọpụta a, echiche nke oge a geological oge.
James hutton Ọ bụ onye malitere ihe atụ ahụ n'ihi nkuzi ya nke Plutonism. N'oge a e nwere ndị Neptunism na catastrophism ndị kachasị echiche. Onye ọkà mmụta banyere ala a gbachitere mmalite dị egwu nke granite na nkume mgbawa ugwu. Ihe a kpọrọ ụdị a bụ Plutonism. N'ihi ịkpa arụ ya, etinyela ya na otu ndị ọkà mmụta akwara kachasị mma n'akụkọ ihe mere eme.
Mgbe emesịrị ọ malitere ịkọwa echiche nke usoro ọmụmụ ala ma gosipụta na usoro ihe banyere ala na-arụ ọrụ ogologo oge na ọdachi na mmemme Chineke dị mkpa iji nwee ike ịkọwa akụkọ ihe mere eme nke ụwa. Ọ bụkwa onye bu ụzọ nke eziokwu na echiche nke oge miri emi. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, Charles Lyell ga-ekwupụta echiche a.
Sayensị a bụ onye nyocha nke na-amụkarị London Basin n'oge mgbanwe usoro ọrụ. Otu n’ime nsogbu nwoke a na - enweghị ike ịpụ apụ nke ukwuu bụ na ọ nwere ọkwa mmekọrịta obodo nke na - enyeghị ya ohere ịgụ akwụkwọ na mahadum. Ebe ọ na-enweghị ike ịgụ akwụkwọ na mahadum ahụ, ọ malitere ịrụ ọrụ dị ka onye na-amụ ọrụ nyocha, nke n'oge ahụ bụ ọrụ a na-ahụkarị.
Ndị nyocha ahụ dị nnukwu mkpa na ebe a na-egwupụta kol, na mmepe nke injin ọrụ ụlọ ọrụ na iwu nke ọwa mmiri iji ebu mmiri. Na London Basin, e nwere usoro mbara ala dị mfe nke nwere ọkwa dị iche iche. Ọ nwere ike ịchọpụta ihe ndị fosilili ahụ nke dị n'igwe ahụ nwere mgbe ụgbọ okporo ígwè dị. Ngwurugwu ndị a na-eme n'usoro akọwapụtara mgbe niile. Nke a bụ otu enwere ike isi guzobe oge ọhụụ nke ihe ochie ndị kwekọrọ. N'ihi fosili ndị a ọ ga-ekwe omume inye onye ikwu afọ na strata.
N'ihi ọkà mmụta sayensị a, e chere na ọmụmụ nke biostratigraphy. O mekwara map mba mbụ nke akụkọ ihe mere eme na-anọchi anya na map ala. Enwere ike ịrụ ya na agba dị iche iche na ọ bụ maapụ gbanwere ụwa.
Ọ bụ otu n'ime ndị ukwu anatomists nke oge ya ma nwee nnukwu ugwu na mmetụta. Ọ bụghị naanị ịmụ banyere geology kamakwa ọ na-ahụ maka nyocha ihe ọmụma banyere ụmụ anụmanụ. Georges cuvier bụ onye guzobere paleontology dị ka sayensị ọ bụkwa ya bụ onye mbụ nyochara ihe ndị dị mkpa. Otu n'ime ihe ndị a dị mkpa bụ mbibi na usoro mbibi ndị dịrịla na mbara ụwa anyị. Ihe ndị a niile bụ ihe ịtụnanya na jọgburu onwe ha gbanwere ndụ n’ụwa.
Isi ọrụ nke onye ọkà mmụta sayensị a bụ isi okwu nke echiche na-emegide evolushọn nke oge ahụ. O gosipụtara nkà dị ukwuu iji nwee ike iwughachi ihe ochie na ọbụna site na obere iberibe.
Otu ọkà mmụta sayensị ọzọ so n’otu ndị ọkà mmụta ihe ọmụmụ kasị mma n’akụkọ ihe mere eme. Ọ bụ onye ọka iwu site na ọzụzụ na onye isi na-ahụ maka mgbasa nke echiche niile gbasara eziokwu. nke Hutton. Echiche ndị a gosipụtara na ugbu a bụ isi ihe na-eme n'oge gara aga. Otu narị afọ mgbe amuchara Charles Lyell ọ bụkwa site na ọnwụ Hutton ka Charles Darwin gosipụtara ụkpụrụ nke mmụta ala.
Ọnye na -bụ Alfred Wegener?
Ha bụ ndị German sayensị, geophysicist, meteorologist. Ọnye na -bụ Alfred Wegener? Onye Mmepụta nke Theory nke kọntinent. Akacharo ya dika onye na-enyocha mbara igwe ma emesia itinye onwe ya na ihu igwe. Ọ banyela n'akụkọ ihe mere eme n'ihi na ọ bụ onye mbụ na-agbachitere nkwupụta ihu ala nke gụnyere njikọta nke nsụgharị nke kọntinent. Ọ nwụrụ na oyi na Greenland na 1930, na njem ebe ọ na-achọ ihe akaebe iji kwado echiche ya.
Otu n'ime data nke ọ dabeere na iji chebe tiori nke kọntinent agagharị kwuru na otu kọntinenti dị ọtụtụ nde afọ gara aga, nke ọ kpọrọ Pangea. Kemgbe ọtụtụ afọ, nkewa a kachasị nkewa na nkewa malitere. Na njedebe, kọntinent ahụ nọ n'ọnọdụ ha nwere taa. Ọ dabere na ụfọdụ fosilili o meriri ma debe na kọntinent nke kọntinent nke oge a nke dabara na myirịta dị ukwuu.
Ozizi banyere ịkpafu kọntinent ziri ezi mana ezughi oke. Mgbe e mesịrị ọ bịara mara ekele maka Efere Tectonic na ha dị adị convection ugbu a ke terrestrial mantle na ọ bụ ihe na-eme ka mmeghari nke kọntinent ahụ. Alfred Wegener enweghị ike inye akaebe nke ihe mere kọntinent ji gbanwee.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ndị ọkà mmụta banyere ala kacha mma n’akụkọ ihe mere eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ndị ọkà mmụta ihe banyere ala kacha mma n’akụkọ ihe mere eme
Daniel NOFRETTA dijo
Ihe omuma nke emeela n'oge kariri ka amara uwa anyi bu ihe ngosi
Zaghachi DANIEL NOFRIETTA